Finfinnee, Amajjii 4, 2010 Sababa rakkoolee invastimantii qonnaa babal’aa naannoo Gaambeellaatti tureen Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa bara 2008tti liqii kennuu dhaabuuunsaa kan yaadatamudha.
Naannichatti lafti qonnaa tokko misoomsitoota lamaaf kennamuunsaa, darbees lafuma kanaarratti Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa misoomsitoota lamaaf liqii kennuunsaa liqii kana akka dhaabuuf sababa jalqabaa ture.
Akka ajaja Waajjira Ministira Muummeettis rakkooleen damichaa baatiiwwaniif erga qoratamee booda baankichi waggaa darbe baatii Guraandhalaa qajeelfama haaraa baasee qonnaawwan babal’oo roobaan misoomaniif gaaffii liqii keessummeessuu jalqabuu isaa beeksisee ture.
Haata’u malee, wayita sana ulaagaaleen liqii argachuuf ba’anii turan baay’ee cimoodha kan jedhu komiin abbootii-qabeenyaan ka’an turaniiru.
Amma garuu qajeelfama baankichi baasee ture dhiisuun piroojaktoota haaraa roobaan misoomanii gaaffii liqii keessummeessuu dhaabuusaa Faanaa Biroodkaastiing Korporetii ibseera.
Daayirektarri Jijjiirama Tarsiimoo fi Koominikeeshinii baankichaa Obbo Kiflee Haayilayyasuus murtoon kun kan murteeffame piroojaktoota irratti qorannoo erga geggessee boodadha jedhaniiru.
Obbo Kifleen akka jedhanitti qorannoo kana booda baankichi invastimantoota qonnaa haaraa roobaan misoomanii gaaffii liqii keessummeessuu dhaabeera; kannneen deggarsaan misoomaa jiran garuu deggaramuu itti-fufu.
Baankichi hanga yoonaa liqii akaakuu invastimantii kanaaf kenne irratti rakkooleen jiran sirraa’uu waan qabaniif murtoo kana murteesseera jedhaniiru.
Murtoo kanarra kan qaqqabame torban darbe ta’uu daayirektarichi ibsaniiru. Liqii haaraa kennuuf hojiin kan jalqabame ta’us, Baankiin Misoomaa piroojaktii qonna babal’aa roobaan misoomsuuf liqii kenne irratti qorannoo geggeesseen liqii kennuuf kan jajjabeessu ta’ee hin-argine.
Obbo Kifleen akka jedhanitti baankichi piroojaktoota kanneen irratti tokko tokkoon qorannoo geggeesseera.
Kanaanis liqii kan dhiheesseef piroojaktoota qonnaa babal’oo roobaan misooman 472 keessaa sochii gaarii jedhamu keessa kan jiran 158 qofa ta’anii argeera. 314 garuu raawwii baay’ee dhadhabaa irra jiru.
Isaan keessaa 68 ammoo guutumaan guutuutti hojii isaanii addaan kutuu isaanii baankichi mirkaneesseera.
Kanaafis baankichi liqii fi deggarsa kaan kennuu kan itti-fufu piroojaktoota 158fi.
Carraaqii abbootiin-qabeenyaa agarsiisanii fi hojii misoomaa bakkicha irratti raawwatamee liqii kennuuf akka ulaagaatti akka fayyadamu eereera.
Obbo Kifleen invastimantiiwwan qonnaa babal’aa yoo deggaraman milkaa’ina qabanii deggarsi kennamu waktii qonnaa dhufu akka jalqabamu himaniiru.
Liqiiwwan qisaasa’an ilaalchisees baankichi hojimaata qabuun kan keessumeessu ta’a jedhan.
Liqeeffarttoota liqii fudhatanii raawwiin piroojaktii isaanii dadhabaa ta’e ilaalchisee baankichi qabeenyaa isaa deebisiisuuf hojjachuu akka danda’u akka filannootti taa’eera.
Qonna babal’aaf liqiin baankii misoomaan kennamee deebi’uunsaa hin-mirkanoofne /non performing loan/ gaheensaa olaanaadha.
Baankiin misoomaa piroojaktoota qonnaa babal’oof hanga yoonaa liqii Birrii biliyoona 5.6 dhiheesseera.
Kana keessaa Birriin biliyoonni 3.63 kan qisaasa’e /non performing loan/ ta’eera.
Kana jechuunis damichaaf kan kenne keessaa dhibbantaa 64 qisaasinatti kan galmaa’edha.
Baankichi gama dameelee waliigalaaf liqeesseen roobaan kan misoomaniif kan liqeesse keessaa dhibbantaan 41 gahee liqaa qisaasa’e qabata jechuudha.
Haala kana keessatti piroojaktoota haaraa roobaan misoomaniif liqii kennuun sirrii ta’ee akka hin-argamne Obbo Kifleen himaniiru.
Kanaafis yoo deggaraman maamiltoota gara raawwii gaariitti dhufan qofa deggaruun itti-fufa jedhan.
Adeemsi kun garuu maamiltoota jallisiin misooman hin-haammatu isaaniif liqii dhiheessuu baankichi itti-fufa jedhaniiru. Kaasaayee Waldeetu gabaase.((FBC))
More in this category: « Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi »
Torbe Kana 51417
Ji'a Kana 91658
01/05/07 irraa eggalee 8190812
Kan Amma Daawwachaa Jiran 35